အားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာကြပါစေ!!! — MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော်ကတော့ Computer crazy လေးပါ။ ကျွန်တော် Computer ကိုစမြင်ဖူးကတည်းက အရမ်း စိတ်၀င်စားခဲ့ပါတယ်။ Computer ရှေ့မှာထိုင်ပြီး keyboard ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် type နေ တဲ့သူကိုမြင်ရရင်ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက သိပ်သဘောကျပါတယ်။ အခုလည်း MZ မှာ computer ပညာရပ်တွေကို ဖြန့်ေ၀ဖို့ ဖလှယ်ဖို့ လာခဲ့တာပါ။
Computer နဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော်အလေးစားရဆုံးသူက Bill Gates ပါ။ ငယ်ငယ်လေးကတည်း က သူက ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ သူရဲကောင်းကြီးပါ။
သူ့ကို လေးစားလွန်းလို့ ကျွန်တော် Computer ကို basic လောက်သင်ပြီးတော့ microsoft 0S အကြောင်းတတ်သိသမျှ ရှာဖွေလေ့လာခဲ့တယ်။
အခုနောက်ပိုင်းတော့ computer နဲ့ပတ်သက်ရင် IT field မှာ Security ကိုစိတ်၀င်စားပါတယ်။
(hacker တွေအကြောင်းပါတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကြည့်တာများသွားလို့နဲ့တူတယ်။)
ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း hacker ဖြစ်ချင်စိတ်တွေအရမ်းဖြစ်မိတယ်။ နောက်တော့ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက် က Windows XP ရဲ့ password ကို tool တစ်ခုသုံးပြီး ကျွန်တော့် ကို hack ပြခဲ့ဖူးတယ်။(Windows XP ပေါ်ပြီး၁ နှစ်လောက်အကြာက microsoft က XP ကို အလွန် secure ဖြစ်သည်ဟု ကြေငြာချိန်ကဖြစ်သည်။) ပြီးတော့ အဲဒီ tool ကို ကျွန်တော့်ကိုပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီ tool က All In One tool ပါ။ အဲဒီ tool လေးကိုကျွန်တော် နားမလည်ပါဘူး။ သူ့မှာပါတဲ့ terms (အခေါ်အေ၀ါ်) တွေကဘာတွေမှန်းမသိခဲ့ဘူး။ အဲဒီ tool လေးကို နားလည်အောင် ကြိုးစားတာ ၃ လလောက်ကြာပါတယ်။ (အကြားအလပ်မရှိတရစပ်ကြိုးစားခဲ့တာပါ)။
အဲဒီ tool လေးက တော်တော်အသုံး၀င်ပါတယ်။ Windows နဲ့ပတ်သက်သမျှ application တွေတော်တော်များများ ကို hack လို့ရတယ်။ password ရိုက်လို့ ******** နဲ့ ဖော်ပြတာတွေ မှန်သမျှ အကုန် ပြန်ပြီး ဖော်လို့လည်းရတယ်။ ပြီးတော့ local hacking ကို အဲဒီ tool လေးနဲ့ပဲ စတင်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က စပြီး hacking ကိုကျွန်တော်သဘောကျမိ သည်... လေ့လာမိသည်မှာ အခုအချိန်ထိပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် hacking ကိုလေ့လာသည်မှာ လေးနှစ်ခန့်မျှရှိခဲ့ပါပြီ။ လေးနှစ်လောက်ကြာသော်လည်း ကျွန်တော်မသိသေးသည့်အရာများ များစွာကျန်နေပါသေးသည်။ ယခုထိ လည်းလေ့လာနေဆဲပါ...ကြိုးစားနေဆဲပါ။ တစ်ခါတစ်လေ လည်း အရမ်းစိတ်ဓာတ်ကျမိ ပါသည်။ စိတ်ညစ်မိပါသည်။
Hacking ကိုစိတ်၀င်စားမိတဲ့အချက်တွေထဲက ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုဖော်ပြလိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်က ကျွန်တော် flash drive တစ်ခု ကို သုံးသောင်းပေးပြီး ၀ယ်ခဲ့ပါတယ်။ မိဘ၀ယ်ပေးတာမဟုတ်ပဲ... ကိုယ့်မုန့်ဖိုးနဲ့ကိုယ် မစားရက်မသောက်ရက် ၀ယ်ထားရသဖြင့်အလွန်တန်ဖိုးထားပါတယ်။ ၀ယ်ထားပြီး ၁ လ မပြည့်ခင် virus တစ်မျိုးထိပြီး ပျက်သွားပါတယ်။ ထိုအခါ ကျွန်တော်အရမ်းခံစားခဲ့မိတယ်။ (ညတောင်အိပ်မပျော်ခဲ့ပါ) ထို virus ကိုလည်းအရမ်းမုန်းမိတယ်။
ထို့နောက် ကျွန်တော် ထို virus အကြောင်းကိုအသည်းအသန်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အဲဒီ virus ကို ဘယ် antivirus နှင့်သတ်ရမည်...virus ရဲ့ အမျိုးအစား virus ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံ... တို့ကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ရှာဖွေရာမှ e-mail virus တစ်မျိုးရခဲ့ပါသည်။ ထို virus ကို သူငယ်ချင်းများအား လှမ်းနောက်ရာ မှစ ပြီး ကျွန်တော် virus ရေးရတာကို ၀ါသနာထုံလာပြန်ပါသည်။
(virus ပို့လိုက်သော mail box များမှာ fake email တွေအများကြီးဖြင့် inbox တစ်ခုလုံးပြည့်သွားပါသည်)
ကျွန်တော့်ရဲ့ လုပ်ရပ်များကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့့်သောအခါ ............ မိမိကိုယ်တိုင်က virus ထိလို့စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ဖူးသော်လည်း ကိုယ်တိုင် virus ရေးနိုင်နေချိန်တွင် virus ကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲကြမည့်သူများရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကိုယ်ချင်းမစာနာခဲ့ပါ။ အဲဒါဘာကြောင့်ဘာလဲ??? ကျွန်တော် နောင်တ ကောင်းစွ ရမိပါတယ်။ သံေ၀ဂ လည်းရပါတယ်။ ငါ့လုပ်ရပ်တွေက ကောင်းရဲ့လား...??? လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးမိတယ်။ ကောင်းတဲ့ရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် Black Hat တွေရဲ့ ခံစားချက်ကို ကိုယ်ချင်းစာသွားတတ်ပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သူတို့ကို အပြစ်မမြင်တော့ဘူး။
အိမ််တစ်အိမ်မှာ လူတစ်ယောက်မှ မရှိရင် တံခါးကို သော့မခတ်ပဲ ဖွင့်ထားရင် ဘယ်သူမဆို ၀င်ပြီးမွှေချင်ကြမှာပဲလေ...။ အဲလိုပါပဲ website တွေမှာ security ဆိုတဲ့ အိမ်သော့ကြီး တံခါးမကြီး မရှိရင် လူတိုင်းလိုလို မွှေနှောက် ချင်မှာပဲ။ ၀င်မွှေနေတဲ့လူတွေကို အပြစ်တင်နေရုံနဲ့ ပြသာနာက မပြီးပါဘူး။ ကိုယ်လည်း သူတို့နေရာ မှာဆိုရင် ၀င်မွှေမိမှာပဲ။ အဲ... ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့....အိမ်တစ်ခုလုံး၀င်မွှေပြီးရင်လည်း အိမ်ရှင်ကိုတော့ သူ့အိမ်တံခါး ပွင့်နေကြောင်း အသိလေးပေးထားခဲ့သင့်ပါတယ်။
ကဲ.... နောက်ဆုံးပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့ပညာကို အကျိုးမရှိတာတွေအတွက်ပဲအသုံးချမိခဲ့တယ်။ လူသားအကျိုးပြု ဆိုလို့ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ လူအများအတွက် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်မည်ဟု စိတ်ကူးမိပါတယ်။
လူသားအားလုံး စိတ်ရော ကိုယ်ပါကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ။ အများကောင်းကျိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေ။
AtalantiQ wrote: »
ဒါပေမဲ့ AtlantiQ ကအဲဒီလိုကိုယ်လမ်းလွဲခဲ့ဘူးတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရဲရဲကြီးဝေဖန်ရဲတာကို ချီးကျူးပါတယ်:6:
Attacker တွေရဲ့ရန်ကိုကာကွယ်ဖို့ကတော့ hacking methodologies ကိုသိကိုသိထားရမှာပါ
MZ may becomeagood road for u bro.
Oh !! I am too late to say welcome in here :D whatever you did, we all are just human, welcome !!!
ိ ကို AtalantiQ ကိုကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ :6::6::6::6: